Ny pavilion aluminium alloy dia ahafahanao miala amin'ny tabataban'ny tontolo ivelany ary mametraka fomba fiaina ara-pahasalamana
Ny hazo kolontsaina nentim-paharazana eto amin'ny firenentsika dia manana faka lalina, ary lasa malaza ny tranoheva alimo sinoa vaovao. Rehefa manaingo ny zaridainany ivelany, mihamaro ny tompony hisafidy ny hanampy tranobe misy singa sinoa. Laharam-pahamehana ny tranoheva alimo sinoa vaovao. Ny objec...
Ny kalitaon'ny aluminium gusset ho an'ny lakozia sy ny valindrihana efitra fandroana
Ahoana ny hatevin'ny gusset aluminium ho an'ny valindrihana lakozia sy efitra fandroana? Amin'ny ankapobeny ny hatevin'ny 0.6mm na 0.7mm ampiasaina amin'ny fitafian'ny fianakaviana. 1. Ny 0.6 mm matevina aluminium gusset no safidy mahazatra amin'ny haingon-trano, satria tsy misy fahasamihafana fototra amin'ny endriny sy ny fampiharana eo amin'ny ...
Firavaka aluminium, hatsarana ara-javakanto samihafa!
Ny aluminium dia metaly manana tantara lava. Izy io no fitaovana sarobidy sy notadiavina indrindra teto an-tany, ary nampiasaina tamin’ny lafiny rehetra tamin’ny fiainan’ny olombelona tatỳ aoriana. Talohan'ny taonjato faha-19, ny alimo dia noheverina ho metaly sarobidy tsy fahita firy, izay lafo kokoa noho ny volamena. Rehefa mpanjaka Eoropeana...
Fampandrosoana sy fampiharana ny fantsona aluminium fitsaboana
Medical aluminium fantsona azo zaraina ho roa karazana: malefaka aluminium fantsona sy mafy aluminium fantsona. Ny fantsona aluminium malefaka dia antsoina koa hoe "tube", izay manalefaka sy ampiasaina amin'ny fonosana fanosotra, menaka, menaka maso ary endrika fatra hafa, fa ny fantsona aluminium mafy dia tsy ...
Ny tanjaky ny tsenan'ny taila aluminium metaly dia hitohy amin'ny taona 2022
Tamin'ny taona 2021, noho ny fitaoman'ny anton-javatra toa ny tsenan'ny fanorenana taloha, ny indostrian'ny taila aluminium antitra metaly dia nampiseho fironana fivoarana haingana. Tombanana fa ny mety ho tsenan'ny taila aluminium metaly dia hitohy amin'ny 2022. Tao anatin'ny taona vitsivitsy, miaraka amin'ny fiakaran'ny...
Ny vidin'ny aluminium electrolytika dia antenaina hitazona ny fironana miakatra
Orinasa aluminium holandey: niakatra be ny vidin'ny orinasa aluminium electrolytika Nisy orinasa aluminium tany Holandy nilaza fa nikatona hatramin'ny 10 Oktobra ny 60-70% ny fahafaha-mamokatra aluminium electrolytic noho ny tsy fahampian'ny famatsiana herinaratra. Noho ny tsy fahampian’ny angovo avy any ivelany, ny...
Ny fanoherana ny harafesina amin'ny fitaovana tafo dia misy fiantraikany mivantana amin'ny fanamainana ny tafo
Aluminum-magnesium-manganese tafo tontonana dia tena lafo vidy tafo fitaovana. Izy io dia manana tombony amin'ny fiainana maharitra, fiarovana ny tontolo iainana ary endrika tsara tarehy, fametrahana mora sy haingana. Manana tombony maro toy ny fanoherana ny harafesina, ny bika aman'endriny, ny hazavana wei ...
Ny takelaka haingon-trano aluminium-magnesium-manganese dia afaka manolo fitaovana tsy misy afo toy ny takelaka aluminium-plastika, veneers aluminium, takelaka honeycomb, sns.
nataon'ny admin tamin'ny 21-10-07
Amin'izao fotoana izao, ny takelaka haingon-trano aluminium-magnesium-manganese dia mampiasa ny dingana mitambatra mafana sy mangatsiaka, izay mampitombo ny haingon-trano, ny fanoherana ny fiantraikany, ary ny fahombiazan'ny afo, ary mamonjy ny 60% amin'ny vidin'ny akora, mahatratra ny vokatry ny famafazana aluminium. veneer sy h...
Antony mampisondrotra ny vidin'ny alimo maneran-tany
Aluminum dia ampiasaina amin'ny zava-drehetra manomboka amin'ny fiara sy kamiao ka hatramin'ny telefaona sy tavoahangy zava-pisotro. Nahatratra 3.000 dolara amerikana isaky ny taonina ny vidiny, avo indrindra hatramin'ny krizy ara-bola maneran-tany tamin'ny taona 2008, ary nihena kely taorian'ny andro vitsivitsy. Saingy mbola lafo saika 70% izany raha oharina amin'ny tamin'ny taon-dasa. Nahoana no pric...
Aluminum firaka entana Amin'ny ankapobeny, dia ahitana ny akorany, bracket, tontonana sy ny faritra hafa mifandray, izay mitana ny tena anjara amin'ny fiarovana ny singa anatiny. Ampiasaina betsaka amin'ny salon hatsaran-tarehy, fampifangaroana fitaovana, firavaka, sehatra, fitaovana, metatra, elektronika, fifandraisana, automation, sensor ...
Nahoana no mafy be ny vidin'ny ingot aluminium?
Aluminum, izay tsy fantatra amin'ny metaly tsy ferrous, dia lasa mofomamy mamy. Entin'ny famatsiana tery, nitombo hatrany ny vidin'ny hoavy nanomboka tamin'ny herinandro lasa teo, ary nitombo 6.66%. Ary tamin'ity Alatsinainy ity dia nitohy niakatra be ny Shanghai Aluminum (22245, -1135,00, -4,85%), risi...
Aluminum-magnesium-manganese takelaka manohana
nataon'ny admin tamin'ny 21-09-06
Fanamafisana ny bracket miendrika T ho an'ny tafo metaly aluminium-magnesium-manganese Aluminum-magnesium-manganese metaly tafo buckle (aluminium-magnesium-manganese takelaka tafo fisaka fanohanana raikitra) Ny fanohanana raikitra ho an'ny tafo metaly aluminium-magnesium-manganese dia antsoina koa hoe aluminium-alloy fanohanana. Izy io dia vita amin'ny...
Ny fanaka aluminium rehetra! Ny safidy voalohany ho an'ny trano ho avy
Ny lakozia aloha no resahiko e! Toerana mando sy maloto ny lakozia, ka ny kabinetra ao an-dakozia no manahirana indrindra. Mora voan'ny bobongolo izy ireo. Tsy ho tsara tarehy izy ireo rehefa afaka herintaona na roa raha vao nohavaozina. Ankehitriny dia misy firaka vita amin'ny alimo fa tsy vita hazo...
Aluminum: Apetraka matetika ny politika, ary miovaova be ny vidin'ny aliminioma
Ifantohan'ny herinandro Tamin'ny herinandro lasa teo, namoaka ny “Baromètre de complément des lasibatra fanaraha-maso roa tonta amin'ny fanjifana angovo any amin'ny Faritra isan-karazany amin'ny tapany voalohany amin'ny 2021″ ny Vaomieram-pirenena momba ny fampandrosoana sy ny fanavaozana. Ny hamafin'ny fanjifana angovo amin'ny faritany 9 (faritra) ao Qinghai, Ningxia, Guan...
Ny vaovao dia mitohy manelingelina, ary ny vidin'ny aluminium dia eo amin'ny lafiny matanjaka
Mahazo tombony: 1. Nitohy hatrany ny fanelingelenana ny vaovao farany. Ny orinasa Australian Tomago aluminium dia mety hiatrika ny mety ho fahatapahan'ny famokarana noho ny fitokanan'ny mpiasa. Any Nouvelle-Galles Atsimo Nouvelle-Galles Atsimo no misy ny orinasa aluminium ary ny fandoroana alimo lehibe indrindra any Aostralia miaraka amin'ny capa famokarana isan-taona...
Ny famerana ny herinaratra sy ny famerana ny famokarana, niakatra mihoatra ny 30% ny vidin'ny aliminioma tamin'ity taona ity
Nanomboka tamin'ny fiandohan'ity taona ity dia nihodina ny lohahevitry ny sehatry ny metaly tsy misy vy. Ny fiakarana miharihary indrindra dia ny alimo, ary nahatratra 20.445 yuan/ton ny vidin'ny alumina hoavy, firaketana ambony tao anatin'ny 10 taona lasa. Feng Fan, mpandinika aluminium ao amin'ny Yide Futures, dia mino fa ...
Zarao: ALUMINIUM | TATAO ISAN-kerinandro: TSY HIOVA NY LALANA FAHASALAMANA FAHASALAMANA NY FAHASALAMANA FAHASALAMANA
nataon'ny admin tamin'ny 21-08-11
Ny fanjifana aliminioma any Shina dia miorina amin'ny ankapobeny, ary miverina ny sisin'ny fangatahana any ivelany Avy amin'ny fomba fijerin'ny firafitry ny fanjifana terminal, ny fananganana, ny fitaterana ary ny telegrama dia mitentina 66% amin'ny fangatahana aluminium electrolytique ao amin'ny fireneko, izay ahitana ny fanorenana ...
Aluminum | Tatitra isan-kerinandro: Tsy hanova ny fomba ara-pahasalamana fototra ny fampihenana ny herinaratra sy ny fikorontanan'ny areti-mifindra
Satan'ny indostria Nitombo indray ny vidin'ny Aluminum tamin'ity herinandro ity, ary nitohy ny fihenan'ny famatsiana an-trano. Ny vidin'ny aluminium dia nikatona tamin'ny 19,920 yuan / taonina tamin'ity herinandro ity, 0.45% isan-kerinandro. Araka ny tombatombanay, ny salan'isa amin'ny indostrian'ny aluminium electrolytique dia 4172 yuan / taonina, -0.25% amin'ny ...
Ny vidin'ny fanondranana ny indostrian'ny vy sy alimo roa lehibe dia mety hiakatra be, manohitra mazava tsara ny rafitra fanitsiana ny sisin-tanin'ny karbaona an'ny EU i Shina.
nataon'ny admin tamin'ny 21-08-05
"Ny mekanika fanitsiana sisintany karbona dia fepetra tokana. Manitatra tsy amin'ny fotony ny olan'ny toetr'andro amin'ny sehatry ny varotra. Mandika ny fitsipiky ny WTO izy io, miantraika amin'ny rafitra ara-barotra malalaka sy malalaka, ary manimba tanteraka ny fifampitokisana eo amin'ny fianakaviambe iraisam-pirenena...
Moa ve ny Titan Machinery (TITN) nihoatra ny antsinjarany sy fivarotana ambongadiny hafa tamin'ity taona ity?
Ireo mpampiasa vola liana amin'ny tahiry antsinjarany sy ambongadiny dia tokony hitady hatrany ny orinasa tsara indrindra ao amin'ny vondrona. Iray amin'ireo tahiry amin'ity taona ity ve ny Titan Machinery (TITN)? Andeha hojerentsika akaiky ny zava-bitan'ny stock isan-taona mba hahafantarana. Titan Machinery dia iray amin'ireo 211...
Tsy fohy ny fotoam-pialan-tsasatra. Nahoana ny vidin'ny alimo no mbola natanjaka tamin'ny volana Jolay?
Tamin'ny Jolay, ny salan'isa vidin'ny aluminium ingots amin'ny ankapobeny dia nampiseho fironana ambony, ary ny asa isan-karazany dia 18,700-19,900 yuan / taonina. Araka ny angon-drakitra dia 19.856.67 yuan/ton ny vidin’ny salan’isa an’ireo ingot aluminium ao an-toerana ao amin’ny tsenan’i Sina Atsinanana tamin’ny 30 jolay lasa teo, raha oharina amin’ny marika...
RM I dia latabatra misavoritaka vita amin'ny fantsona aluminium efamira
nataon'ny admin tamin'ny 21-08-02
Ny fanaka farany amin'ny fanangonana United Objects nataon'i Joseph Smolenicky architect Zurich dia ny RM I Table. Vita amin'ny fantsona aluminium efamira iray manontolo ity latabatra mampisavoritaka ity, ary ny fandrindrana azy dia mampiseho ny fomba azo ampiasana fitaovana tsotra hanaovana zavatra sarotra. Ny hakanton'ny RM I dia mipetraka amin'ny t...
Governor Lee sy ny Kaomisera Rolf dia nanambara fa ny Caesars Aluminum dia hamindra ny foiben'ny orinasa any amin'ny Williamson County
Nashville, Tennessee - Ny governora Tennessee Bill Lee, ny Kaomisera momba ny fampandrosoana ara-toekarena sy ny fiaraha-monina Bob Rolf, ary ny tompon'andraikitra Caesars Aluminum dia nanambara androany fa ny orinasa dia hamindra ny foibeny avy any Foothill Ranch, Kalifornia mankany Franklin, Tennessee. Caesars Aluminum dia 1,8 miliara dolara amerikana ...
Nirodana ny fandraharahana vy any Aostralia! Nandefa andiana hetsika goavana i Shina hanohanana ny indostrian'ny vy
midadasika sy manankarena harena an-kibon'ny tany i Shina. Na izany aza, satria i Shina no firenena indostrialy lehibe indrindra eran-tany ary mandany harena be dia be, ny sasany amin'ireo harena an-kibon'ny tany dia mila hafarana. Mikasika ny harena vy sy arintany fampiasa amin'ny indostrian'i Sina, na dia ny fitambaran'ny r...
Ny fanamboaran-trano vita amin'ny aluminium rehetra miaraka amin'ny tanjaka dia mitarika ny indostrian'ny fanatsarana trano
nataon'ny admin tamin'ny 21-07-29
Eo ambanin'ny fiarovan'ny karbônina ambany sy ny fiarovana ny tontolo iainana, ny indostrian'ny kojakoja an-trano vita amin'ny aluminium rehetra dia mbola mafana. Na dia indostria vao misondrotra aza izy io, miaraka amin'ny fahombiazany tsara dia manana fahafahana lehibe ho lasa fitaovana haingon-trano mahazatra izy. ...
Metal tsy ferrous
nataon'ny admin tamin'ny 21-07-22
Metal tsy ferrous: [Metallurgy] metaly tsy ferrous, amin'ny heviny tery, metaly tsy ferrous dia antsoina koa hoe metaly tsy ferrous, izay teny ankapobeny ho an'ny metaly rehetra afa-tsy vy, manganese, ary chrome. Ny metaly tsy ferrous amin'ny heviny midadasika dia misy koa ny firaka tsy ferrous. Ny firaka tsy ferrous dia firaka...
Raha vao mametraka hetra i Rosia, dia mety hametra ny fanondranana alimo i Rusal
Rusal International PJSC, mpamokatra aliminioma lehibe indrindra any ivelan'i Shina, dia mety hametra ny fanondranana ny metaly rehefa manankery amin'ny volana manaraka ny sara apetraka amin'ny entana. Ny orinasa dia manondrana alimo 3 tapitrisa taonina isan-taona, ary amin'ity taona ity dia mety hampihena ny varotra alimo an-jatony ...
Fanitsiana ny aluminium
Araka ny voalazan'ny "Hevitry ny fitarihana amin'ny fanamafisana ny fisorohana sy ny fanaraha-maso ny tontolo iainana ara-tontolo iainana amin'ny tetikasa fananganana "avo roa" navoakan'ny minisiteran'ny ekolojia sy ny fiarovana ny tontolo iainana andro vitsy lasa izay, ny indostrian'ny fanodinana aluminium dia tsy misy lon...
Betsaka ny gazy karbonika novokarina nandritra ny famokarana aluminium electrolytique. Tsy mifanaraka amin'ny toe-tsaina "neutre neutralité" sy "peking carbone" naroson'ny mpitondra sinoa tamin'ny taon-dasa izany. Amin'ny ho avy rehefa omena lanja hatrany ny fiarovana ny tontolo iainana, ny fandrosoan'ny e...
Zarao | Antony valo misy fiantraikany amin'ny tanjaky ny harerahana amin'ny fitaovana metaly
nataon'ny admin tamin'ny 21-06-18
Ny tanjaky ny harerahana dia tena saro-pady amin'ny anton-javatra ivelany sy anatiny isan-karazany. Ny anton-javatra ivelany dia ahitana ny endrika sy ny haben'ny ampahany, ny endriky ny ety ivelany sy ny fepetra fampiasana, sns. Ny anton-javatra anatiny dia ahitana ny firafitry ny akora, ny toetry ny t...
Zarao | Fanamboarana milina ambony indrindra - lelan'ny fiaramanidina
1 Fikarakarana ny lelany Ny lelany dia ampahany mahazatra amin'ny endrika malalaka. Rehefa manamboatra ity karazana ampahany ity dia misy toetra: manify, mora deforme mandritra ny fanodinana, ary matetika ny fitaovana dia vy tsy misy pentina, firaka Monel, INCONEL, titane sy nikela-monina sarotra-to-machine firaka materiala...
IAI: Ny fangatahan'ny aliminioma dia andrasana hitombo 80% eo ho eo amin'ny 2050. Ny alimo faharoa dia afaka mahafeno ny antsasaky ny fangatahana
nataon'ny admin tamin'ny 21-06-04
Araka ny angon-drakitra navoakan'ny International Aluminum Institute (IAI) any Londres, dia nahatratra 20 tapitrisa taonina ny habetsaky ny koba aliminioma taloha tamin'ny taona 2019, izay mitentina eo amin'ny 60% amin'ny fitambaran'ny fako aluminium tamin'io taona io, izany hoe 300 tapitrisa. taonina ny entona entona mandatsa-dranomaso amin'ny...
Nanolo-kevitra ny hametraka hetra gazy karbonika amin'ny alimo sy zezika ny EU
Araka ny volavolan-dalàna, ny Vaomiera Eoropeana dia hanolotra mekanika fanitsiana sisintany karbona ho an'ny herinaratra nafarana avy amin'ny Vondrona Eoropeana. Ny saran-dàlana vaovao dia ampifandraisina amin'ny fandaniana efa atrehan'ny mpamokatra EU ary mihatra amin'ireto vokatra manaraka ireto: simenitra Portland, avo al...
Fampiasana aluminium amin'ny fiara fandefasana
Aluminum dia lasa fitaovana fototra tena manan-danja amin'ny fandefasana fiara, satria ny firaka aluminium dia manana hakitroky ambany ary tsy manam-paharoa amin'ny fampisehoana hafanana ambany. Ny hidrôzenina ranoka sy ny tanky solika oksizenina amin'ny balafomanga fandefasana dia vita amin'ny firaka aluminium. Ny rafitra fototry ny cabi...